बिहीबार जन्मेका मान्छेहरूको स्वभाव कस्तो?? जन्नुहोस « Np Online TV
बिहीबार जन्मेका मान्छेहरूको स्वभाव कस्तो?? जन्नुहोस
मानिसहरुमा विश्वास छ कि जन्मेको महिना, गते, समय अथवा पलले मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसका साथसाथै दिनको असर पनि जीवन र व्यक्तित्वमाथि हुने गर्दछ त्यसकारण त आजकालका मानिसहरु आफ्ना बच्चाको जन्म यो दिनमा होइन, यो दिनमा गराउनुस् भनेर डाक्टरहरुलाई आग्रह गर्ने गर्दछन् । बिहीबार जन्मेका मान्छेहरूको स्वभाव कस्तो?? जन्नुहोस :
– बिहीबार जन्मेका व्यक्ति निकै मेधावी, शान्त र निकै समझदार हुने गर्दछन्।
-मानिसहरुलाई निकै इज्जत गर्छन्, त्यसकारण मानिसहरुका लागि आदर्श पनि हुन्छन्।
– सफा र स्वच्छ विचारधाराका हुन्छन्।
– भित्र नेतृत्व गर्ने गुण हुन्छ, त्यसकारण जुन क्षेत्रमा काम गर्छन्, त्यहाँको उच्च पद अवश्य हाँसिल गर्छन्।
– निकै मेहनत गर्छन् र आफ्ना सामान हरु आफैले भनेकाे ठाउँमा हाेस् भन्ने चहान्छन्।
– स्वतन्त्रता मन पर्ने भएका कारण बन्धनमा बस्न चाहन्छन्।
– चाँडै नै मानिसहरुलाई विश्वास गर्छन् जसकाे प्रतिफल भोग्न पर्छ।
– धेरै साथी हुन्छन् तर साँचो मित्र निकै कम हुन्छन्।
– स्टेट फरवार्ड हुन्छन् र सुन्दरताको प्रिय हुन्छन्।
– बिहिबार जन्मेका व्यक्ति आकर्षक र अन्टेन्सन प्रिय हुने भएका कारण धेरैजसो यिनीहरु प्रेम विवाह गर्छन्। उनीहरुको वैवाहिक जीवन सुखमय हुनेछ
– स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले बिहिबार जन्मेका व्यक्तिहरु धेरैजसो सानो–तिनो रोगको शिकार हुने गर्दछन्, जस्तै ज्वरो, पेट दुखाई अथवा टाउको दुखाई।
– बिहिबार जन्मेका व्यक्तिहरु धेरै पैसा कमाउने गर्दछन् र मन खोलेर खर्च पनि गर्छन्।